Hoobiyaal lagu weerarey Airport Kismaayo xalay iyadoo wafdiga wasiirka gaashaandhiga ay habeenkii 2aad ku hoydeen hakaas – idalenews.com
Xoogag ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa xalay dagaalo iyo duqeymo ku qaaday garoonka diyaaradaha Kismaayo iyo fariisimo ciidamada ku leeyihiin duleedka magaalada, iyadoo weerarkan ku soo beegmay xilli habeenkii labaad ku sugan yihiin wafdi wasiiro ah oo uu hogaaminayo Wasiirka Gaashaandhiga.
Sida ay sheegayaan wararka duqeymaha ayaa la sheegay inay qeybo ka mid ah Garoonka ku dhaceen, iyadoo ciidamada dowladda, kuwa Raaskambooni iyo Ciidamada Kenya ay jawaab ka bixiyeen.
Abaanduulaha ciidamada xooga dalka Jen. C/risaaq Khaliif Cilmi ayaa xaqiijiyay in xalay fiidkii la soo weeraray garoonka diyaaradaha Kismaayo, isagoo muujiyay in wali jirto halista Al-Shabaab ku yihiin Kismaayo.
“Qoriga Hoobiyaha iyo rasaas bey meelaha ka soo ridayeen, waana lagu baxayay oo waa la iska caabiyay, ciidamada dowladda, raaskambooni iyo ciidamada Kenya ayaana iska daafacay”ayuu yiri Abaanduulaha.
Abaanduulaha ayaa sheegay in aanay wax dhib ah geysan hoobiyeyaasha iyo rasaasta lagu soo riday.
Wafdiga uu hogaaminayo Wasiirka Gaashaandhiga oo ay ka mid yihiin Wasiirka Warfaafinta, Wasiirka Garsoorka iyo Arrimaha diinta, saraakiil ciidan iyo xildhibaano horay ugu sugnaa magaalada ayaa garoonka diyaaradaha ku xayiran, kadib markii loo diiday inay gudaha u galaan magaalada, ciidamada Kenya ay ku wargeliyeen in aanay ammaankooda damaanad qaadi karin.
Dhinaca kale Xoogaga Al-Shabaab ayaa xalay weeraro hoobiyeyaal ku qaaday saldhig ciidamada dowladda ku leeyihiin duleedka degmada Garbahaarey ee Gobolka Gedo, iyadoo ciidamada dowladda ay madaafiic ku jawaabeen.